Ilaalinta Iibiyaha -
Sida looga fogaado raadaarka Hakinta iyada oo aan kumanaan Doollar lagu bixin Rafcaannada Ka -joojinta.
Dhammaan iibiyeyaashu waxay og yihiin in siyaasadaha Amazon ay maalinba maalinta ka dambaysa sii adkaanayaan gaar ahaan marka Iibiyeyaashu ay samaynayaan DropShipping. Ilaalinta A+ Iibiyuhu wuxuu hoos u dhigayaa fursadahaaga dejinta oo wuxuu ku siin doonaa gees adiga oo si dhaqso leh ugu dhaqma arrimaha la xiriira Caafimaadka Xisaabta.
Maxay Ilaalinta Iibiyaha A+ Muhiim u tahay?
Qof kastaa wuu ogyahay in Hakinta Amazon ay tahay heshiiska dhabta ah. 3 ka mid ah 10 Xisaabaadka lama dhaqaajiyo xitaa kadib marka ay soo gudbiyaan Racfaano badan. Haddii Xisaab la joojiyo, waxaad ku bixisaa $ 1k -$ 2k cayrin kasta, welina, ma jirto HUBAAL in lagu hawlgelin doono. Ilaalinta A+ iibiyaha ayaa badbaadin doonta waqtigaaga iyo lacagtaada, sidoo kale waxay yareyn doontaa fursadahaaga hakinta ilaa 80% taas oo iibiyahasta uu raadinayo. Ilaalinta A+ iibiyaha ayaa u dhaqmeysa sidii Nolol -nololeed dhammaan kuwa iibiya Amazon.
Suurtagalnimada Joojinta 80% ayaa Yaraatay
Dhammaan xadgudubyada siyaasadda waxaa si degdeg ah loola tacaali doonaa taas oo si toos ah u yarayn doonta suurtogalnimada hakinta
Caafimaadka Xisaabta Xaalad Wanaagsan
Ilaa heer Waxqabadka maraakiibta iyo waxqabadka adeegga macaamiisha ayaa caafimaadka xisaabta ku hayn doona Xaalad aad u fiican
Daboolista Hakinta Mustaqbalka
Haddii aad shaqada ka joojiso xitaa ka dib markaad si degdeg ah wax uga qabato arrimaha oo dhan. Waxaa lagugu dabooli doonaa Cayrinta mustaqbalka.
In ka yar 2 Jebinta Siyaasadda ama Sheegashooyinka AZ ee Koontada.
Nadiifinta Caafimaadka Xisaabta
HA KA QAADIN FURSADDA LOO HELO
WAX DHEERAAD AH 5% -10% DHAQAALE
Dhaqso u noqo- Dalabkan Wax-ku-oolka ah wuxuu ku dhammaan doonaa:
Miyaad wax su'aal ah ka qabtaa qorshahan? Eeg liiska hoose su'aalaheena inta badan la isweydiiyo Haddii su'aashaadu aysan halkan ku taxnayn, fadlan nala soo xiriir.
Ma saxiixi karaa? Haddii aan ku leeyahay wax ka badan 2 xadgudub siyaasadeed xagga koontada?
Haa, Waa inaad bixisaa qaddar dheeraad ah 4 -ta bilood ee ugu horreysa.
Haddii shaqada la iga joojiyo ka dib markaan saxiixo qorshaha, Ma inaan wax lacag ah bixiyaa?
Ka waran haddii shaqada la iga joojiyo isla bishaas ka dib markaan iska qoro qorshahan?
Waa inaad haysataa rukunka ugu yaraan 6 bilood si aad u hesho caymis. Haddii shaqada lagaa joojiyo 6 bilood ka hor waxaad u baahan doontaa inaad bixiso kaliya 1/3 ee Baakadaha Warqadda Rafcaanka.